Suuqgeynta Dhacdada: Sida Loogu Kordhiyo Dhacdadaada Xiga
Waxaan inbadan jeclaa Hugh McLeod iyo farshaxankiisa at gapingvoid sanado badan, sanado badan. Hugh ayaa dhowaan daabacay bandhiggan ku saabsan supercharging munaasabaddaada. Qaar badan oo ka mid ah suuqleyda dhacdooyinka ayaa rumeysan in suuqgeyntu ay dhammaato marka dhacdadu bilaabato. Maalintan raadinta iyo baraha bulshada, in kastoo, ku-sarreynta munaasabaddaada bixinta iyo fursadaha saxda ah ay riixi doonto guusha dhacdadaada - iyo dhacdooyinka xiga ee bilaha iyo sannadaha soo socda.
Markii aan ka akhriyo khadka tooska ah ee ku saabsan waayo-aragnimada dhacdo weyn oo ay asxaabtaydu hayaan, ma caawin karo laakiin waxaan dareemayaa xoogaa inaan ka maqanahay. Waxaan ka dhigaa hal dhibic si aan u ballansado gaadhitaanka dhacdada xigta ee ay dadka iyo qabanqaabiyayaashu isu keenayaan. In kasta oo suuqgeyntaada kaqeybgalka dhacdada hadda taagan ay istaagi karto marka ay albaabadu furmaan, haddana dadaalka suuqgeynta ee dhacdada xigta ayaa hadda billowday!
Tags: suuq-geynta suuqadhacdooyinkaShirarka Suuqgeyntadhacdooyinka suuqgeyntaraadinta shirarkadhacdooyinka raadintashirarka warbaahinta bulshadadhacdooyinka warbaahinta bulshada
Nov 13, 2012 saacadu markay tahay 10:38 PM
HI Douglas, waad ku mahadsan tahay talooyinkan cajiibka ah. Si kastaba ha noqotee, waxaan uun ahay xiisaha aan u maleynayo inay u baahan tahay in la isu diyaariyo markii aad bilaabeysay riyadaada weyn. Runtii waxaan ka fikirnay dhamaan wixii diyaar garow ee aad ku sheegtey boostadaada.